Indonezia: Fisindàna Nataon’ny Video4Change An’ny EngageMedia Momba Ny Lahatsary Ho An’ny Fanovàna Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2012 2:09 GMT
Nifarimbona tamin'ny fampiantranoana ity hetsika ity ny Engage Media sy ny WITNESS miaraka amin'ireo mpandray anjara avy amin'ireo fikambanana 12 samy hafa izay mifantoka amin'ny fampiasàna ny lahatsary ho amin'ny fanovàna sosialy avokoa. Avy ao amin'ny famintinan'ny Engage Media an'ilay hetsika:
Iray amin'ireo zava-nasongadina ny fijerena maso ny halalaka sy halalin'ny fahafahana mampiasa ny lahatsary hanampiana ny fiovàna sosialy. Nanana paika sy fomba samy hafa momba ny fanovàna amin'ny fampiasàna ny lahatsary ho amin'ny fanovàna ireo fikambanana nandray anjara. Ny sasany tamin'izy ireo mampiasa ny lahatsary firotsahana an-tsehatra ho fomba iray hampiraisana ny vondrom-piarahamonina, ny sasany mampiasa ny lahatsary hiraketana ireo fanitsakitsahana ny zon'olombelona handrafetana politikam-panovàna goavana sy hanairana ny saina amin'ny zavatra mihatra amin'ireo vondrom-piarahamonina, ary ny sasany mampiasa ny lahatsary hanohanana ny vondrom-piarahamonina sy ny fanaovan-gazetim-bahoaka hampiakarana ny fahaiza-manaon'ny vahoaka amin'ny fanolorany ny tenany sy ny olany. Ity bangonà traikefa ity dia nanampy tamin'ny famaritana ny video4change.
Vondronà mpandray anjara tamin'ny Video for Change 2012
Tsy adihevitra daholo anefa no nisy. Teny anatin'ny dingana teny, raha nametaka ireo loharano sy fitaovana misy ho an'ireo liana amin'ny fampiasàna ny Video for Change tamin'ny sary izy ireo, afaka namantatra ny tsy ampy tamin'ny fahalalàna efa eo an-tànana amin'ny fanofanana ny olona anatin'ny Video for Change. Raha misy ny fitaovana, loharano sy torolàlana ampy ho an'ireo dingana sasany tahaka ny Paikady, Drafitrasa ary Famokarana mialoha, raha nila fanampiana bebe kokoa kosa ireo toeran-kafa, indrindra amin'ny fampakarana, fanapariahana sy fanoratana ireo lahatsoratra aminà teny mora takatry ny mpamaky sy ahitàna fanadihadiana tranga sy ohatra mitombina sy mandritra ny ampahany faharoa amin'ny fihaonana, nivondrona izy ireo hanandrana sy hameno ireo fahabangàna ireo.
Iray tamin'ireo fikambanana nahazo fanasàna ny MIT Center for Civic Media, ary anatin'ny tatitry ny hetsik'izy ireo, nanoratra famintinana ilay hetsika ny mpanatrika tao, Becky Hurwitz:
Io no karazanà hackathon tsara indrindra. Ny v4c dia momba ny fananganana ny fahalalàna, ireo loharanom-panofanana, sy ny vondrom-piarahamonina ary dia lavorary avokoa izany. Fifangaroanà drafitrasa, finiavana, ary majika ny famoronana hetsika lavorary tahaka izany.
Nisolo tena ny Transmission Network sy ireo Torolàlan'ny FLOSS mavitrika indrindra i MickFuzz tany amin'ilay hetsika. Anatin'ny lahatsoratry ny bilaoginy, nanasongadina ny asan'ireo fikambanana tahaka ny Witness, Small World News ary Insight Share izy, izay mamokatra loharam-pampiofanana amin'ny fampiasàna ny lahatsary ho amin'ny fanovàna sosialy. Toa nahitàna vokatra sahala amin'ireo tany amin'ny sekoly ambony ireo hetsika taorian'ny fotoana fihaonana: ohatra, ny fampiasàna vohikala fanaovàna lohateny kely ao anaty aterineto hahitàna lahatsary hohiraina miaraka, izay tsy fahita matetika any amin'ireo karaoke, sy ireo traikefan-dalambe nozarain'ny lahatsarin'ny vondrona Egyptiana Mosireen.
Làlana iray lehibe amin'ny fitondràna ireo vondrom-piarahamonina hitambatra sy ho fankalazana ny maha-isika antsika ary ny tantara teo aloha ity (ary mizara izany amin'ny hafa ihany koa!). Sady tena Andraimby no Mpitatitra mihitsy! Amin'ny fomba hafa, amiko dia singa mampahazoto indrindra amin'ny lahatsary ho fanovàna ny fampiasan'ireo vondrom-piarahamonina ny lahatsary ivelan'ny mahazatra.
Samy naneho ny fanirian'izy ireo hahabetsaka kokoa ireny fihaonana ireny ireo mpandray anjara sy ireo mpikarakara. Mandritra izany fotoana izany, hanohy hamoaka fanavaozam-baovao sy ireo famoahana avy amin'ny fihaonan'ny Video 4 Change ny Engage Media ao amin'ny bilaogin'izy ireo.
21 ora izayAfrika Mainty
2 andro izayMalezia
Manan-kery ao anatin'ny ahiahy mikasika ny vonjy taitra COVID-19 ny lalàna momba ny “vaovao hosoka” ao Malezia
Niala tsiny ilay Youtuber Shinoa Tia tanindrazana rehefa avy nitsikera momba ny propagandy sy ny kolikoly